Sangoota Sadii fi Bineensa – siifsiin
Sangoota Sadii fi Bineensa
Dur-dur sangoonni sadii fi waraabeessi tokko waliin jiraatu ture jedhama. Sangoota sadeen keessa tokko gurraacha, lammaffaan burree fi sadaffaan ammo adii ture. Sangoonni sadeen yeroo hunda marga yeroo dheedanii fi bishaanis yammuu dhugan waliin socho’aa turan. Tokkummaa cimaa waan qabaniif jidduu isaanii diinni karaa galee miidhaa irraan gahu argachuu hin dandeenye.
Cimina tokkummaa isaanitiin dhufe kana irraa kan ka’e bineensi isaan nyaachuudhaaf tooftaaleen yaale hundi jalaa fashalaa turee jira. Gaafa tokko garuu, yaadni cimaa fi haaraan sammuu bineensa kanaatti dhufe. Waraabeessi kunis hiriyyummaa cimaa sangoota kanneen waliin hundeeffachuudhaan gargar isaan baasee nyaachuu yaade. Gaafa tokko sadeen isaanii walitti waamee “Isin sadeen waliin jiraachuun keessan gaarii haa fakkaatu malee diinni keessan fagoo dhaabbatee isa addii argee dhufee isin miidhuu waan danda’uuf otuu sangaa adii of irraa gaggeessitani hin wayyuu?” jedheen.
Sangoonnni lamaan gorsa waraabessaa kana dhugaa godhachuun sangaa isa adii irraa kophaa of baasan. Shirri isaa kan milkaa’eef waraabessis isa qophaa bahe sangaa adii kuffisee salphatti nyaate. Guyyaa biraa bineensi mi’eeffate kun deebi’ee dhufee sangaa isa gurraachaan “Ati sangoota hiriyyoota kee isaan burree fi adii irraa qophaa ta’uutu si fayyaada, jaratti yoo makamte diinni salphatti si argatee si miidha” jedheen.
Sangichi gurraachis yaada shiraa hamaa waraabessaa kanaan ammas gowwoomee sangaa isa hafu burree irraa qophaa of taasisee. Warabessichis milkaa’e sangoota addaan of bittinneessan kanneen qophaa qophatti argatee haala salphaa ta’een yeroo adda addaatti kuffisee nyaatee jedhama.
Barattuu Simanyi Bijigaa, Kutaa 6ffaa, Mana Barumsa Sad. 1ffaa Dhibaa’uu
Previous Previous post: Ga’ee garee wal gargaarsaa of-danda’insaa nyaata mirkaneessuu keessatti qaban
Next Next post: Maaf calliftan?